36 Zvino Erihu akatizve: 2 “Ndishivirire kwenguva duku, uye ndichakuzivisaKuti pachine mashoko okuti nditaure nokuda kwaMwari. 3 Ndichatora zivo yangu kure,Uye ndichataura kuti Muiti wangu akarurama.+ 4 Nokuti chokwadi mashoko angu haasi enhema;Iye ane zivo yakakwana+ ari pamberi pako. 5 Tarira! Mwari ane simba+ uye haazorambi munhu;Iye ane simba guru romwoyo une njere; 6 Haazochengetedzi munhu akaipa ari mupenyu,+Asi acharuramisira vanotambudzika.+ 7 Haazobvisi maziso ake pamunhu akarurama;+Kunyange madzimambo anogara pachigaro choumambo+—Iye achaitawo kuti agare pachigaro nokusingaperi, uye achakwidziridzwa. 8 Kana achinge akasungwa nezvisungo zvomumakumbo,+Anosungwa netambo dzokutambudzika. 9 Iye achabva aaudza pamusoro penzira yaanoita nayoPamwe chete nokudarika kwawo, nokuti anozvikudza kwazvo. 10 Iye achavhura nzeve dzawo kuti dzinzwe kurayira,+Uye achaarayira kuti atendeuke pane zvinhu zvinokuvadza.+ 11 Kana akateerera, akamushumira,Achapedzera mazuva awo mune zvakanakaNemakore awo mune zvinofadza.+ 12 Asi kana akasateerera, achaurayiwa+ nechombo chinoita zvokukandwa,+Uye achafa asingazivi. 13 Vaya vane mwoyo yakatsauka vachazviunganidzira kutsamwa.+Havachemeri kubatsirwa nokuti avasunga. 14 Mweya yavo ichafa vachiri vaduku,+Uye upenyu hwavo huchafira pakati pepfambi dzechirume dzepatemberi.+ 15 Achanunura anotambudzika mukutambudzika kwake,Uye achavhura nzeve dzavo pavanenge vachidzvinyirirwa. 16 Achakubvisawo pamuromo wokutambudzika!+Nzvimbo yakafara,+ isina kumanikana, ichava panzvimbo payo,Uye zvinonyaradza zvetafura yako zvichazara nemafuta.+ 17 Uchazara nomutongo unoitirwa munhu akaipa;+Kutonga nokururamisira zvichabata. 18 Chenjerera kuti kutsamwa+ hakukufuriri kuti uombere nepfini,Uye rudzikinuro+ rukuru ngarurege kukutsausa. 19 Kuchemera kwako kubatsirwa kuchabatsira here?+ Aiwa, kunyange mukutambudzikaKunyange kuedza kwako kwose kune simba.+ 20 Usashuva usiku,Kuti marudzi abve paanenge ari. 21 Chenjerera kuti usatsaukira kune zvinhu zvinokuvadza,+Nokuti wakasarudza izvi panzvimbo pokutambudzika.+ 22 Tarira! Mwari anoita zvinhu zvakakwirira nesimba rake;Ndiani murayiridzi akafanana naye? 23 Ndiani akaita kuti azvidavirire kwaari nokuda kwenzira yake,+Uye ndiani akati, ‘Makaita zvisina kururama’?+ 24 Yeuka kuti unofanira kurumbidza basa rake+Rakaimbwa nezvaro nevanhu.+ 25 Vanhu vose vanoramba vakaritarira;Munhuwo zvake anoramba akatarira ari kure.+ 26 Ona! Mwari akakwirira kupfuura zvatingaziva;+Kuwanda kwemakore ake hakugoni kuongororwa.+ 27 Nokuti anokwevera madonhwe emvura kumusoro;+Anopfuura nepasefa semvura inonaya kuti ave mhute yake, 28 Zvokuti makore anodonhedza madonhwe,+Anodonhera vanhu ari mazhinji kwazvo. 29 Chokwadi, ndiani anganzwisisa makore akaturikidzana,Nokutinhira kunobva mudumba rake?+ 30 Tarira! Anoritambanudzira chiedza chake,+Anofukidza pasi pegungwa. 31 Nokuti ndizvo zvaanoshandisa kurwira mhosva yemarudzi;+Anopa zvokudya zvizhinji.+ 32 Anofukidza mheni nemaoko ake,Uye anoirayira kuti irwisane nomudenhi.+ 33 Kutinhira+ kwake kunotaura nezvake,Uyewo zvipfuwo pamusoro peari kuuya.